Furaha guusha J & S Botanics ee waa technology our sare. Ever tan iyo markii shirkadda la aasaasay, waxaan mar walba ku adkeeyay on cilmi madax banaan iyo hal-abuurka. Waxaan soo kiraystay Dr. Paride ka Italy sida nin madax ah saynisyahan iyo dhisay 5 xubnood R & D koox isaga ku wareegsan. In dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, kooxda ayaa soo saartay darsin ah ee alaabta cusub iyo xalliyo arrimo badan oo muhiim ah farsamo si ay tayadoodii habka wax soo saarka our. Iyada oo ay ka, Shirkadda taagan in industry ee gudaha iyo dunida oo dhan labadaba. Waxaan leedahay 7 shatiyada oo ka kooban qaybaha kala duwan ee farsamooyinka fiirsato. teknoolajiyada Kuwani awood inoo siineysaa in ay soo saaraan u yeela daahir sare, dhaqdhaqaaqa noolaha sare, intii ka hadhay hoose ula isticmaalka tamarta hoose.
Intaa waxaa dheer, J & S Botanics ayaa ku hubaysan cilmi our gobolka qalabka shaybaarka farshaxanka. Xarunta Our cilmi ku qalabeysan yahay taangiga yar oo dhexdhexaad ah ka fiirsato, evaporator a Rotary, column chromatography yar yar iyo kuwa meel dhexaadka ah, ururiye spherical, mashiinka qalajinta vacuum yar yar oo lagu buufiyo mini munaaraddii qalalan, iwm Dhammaan hababka wax soo saarka waa in la baaro oo la ansixiyey shaybaarka hor-soo-saarka mass ee warshada.
J & S Botanics haysaa weyn R & S fund sanad kasta taas oo sannad walba ku koraa at heerka 15%. Hadafkayagu waa in lagu daro laba waxyaabaha cusub sanad kasta oo, sidaas, noo hubinta shirkad keentay in industry ee ka fiirsato dhirta ee dunida.